VersaLogic Corporation ဖြန့်ဖြူး | VersaLogic Corporation အီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းများဖြန့်ဖြူး - Infinite-Electronic.hk
- အလွန်မြင့်မားယုံကြည်စိတ်ချရထုတ်ကုန်များနှင့်သာလွန်ဝန်ဆောင်မှုအပေါ်ဂုဏ်သတင်းကိုတည်ဆောက်ခြင်း, ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှု၏ 35 နှစ်သမိုင်း VersaLogic စက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့အများဆုံးယုံကြည်စိတ်ချ embedded ကွန်ပျူတာကုမ္ပဏီဖြစ်ခြင်း၏ဂုဏ်သတင်းရရှိထားပြီးပါပြီ။ VersaLogic ထိုကဲ့သို့သောဆေးပညာနှင့်ကာကွယ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းအဖြစ်အရေးပါစျေးကွက်များအတွက်ကျွမ်းကျင်သူနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုနှင့်အတူ coupled State-Of-The-Art embedded ကွန်ပျူတာများ, ကယ်တင်တတ်၏။
သင်၏စီမံကိန်း၏အောင်မြင်မှုကိုတစ်ဦး embedded ကွန်ပျူတာပေါ်မှာမူတည်ပါသလား? ကမ္ဘာကြီးကိုယုံကြည်မှု VersaLogic န်းကျင် OEMs သူတို့ရဲ့အရေးအပါဆုံးစက်နှင့်စက်ကိရိယာများ၏အတွင်းပိုင်းဖြစ်အဘယ်ကြောင့်ထွက်ရှာပါ။
VersaLogic ပြည့်စုံလူပျိုဘုတ်အဖွဲ့ကွန်ပျူတာ (SBC) ၏ကျယ်ပြန့်ဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဤရွေ့ကား Self-ပါရှိသောကွန်ပျူတာများတစ်စားပွဲခုံ-ထိပ်တန်းကွန်ပျူတာနှင့်ညီမျှသော်လည်း, သေးငယ်တဲ့, ပိုမိုကြမ်းတမ်းခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောအထုပ်ထဲမှာ။ အများစုမှာထိုကဲ့သို့ကီးဘုတ်, က USB, ဗီဒီယို, Ethernet နဲ့ပိုပြီးအဖြစ်စံသွင်းအားစုများနှင့်အကျိုးရလဒ်များရှိသည်။
VersaLogic ရဲ့ embedded ကွန်ပျူတာများအရှိဆုံးတောင်းဆိုမှုများ application များအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေကြပါတယ်။ Ultra-သေးငယ်တဲ့ (ခရက်ဒစ်ကဒ်အရွယ်အစား) မှစက်မှုလုပ်ငန်း-စံကို PC / 104 နှင့်အ EBX အရွယ်ပျဉ်ပြားဖို့, ၎င်းတို့၏ x86 သဟဇာတကွန်ပျူတာများအခါတိုင်းယုံကြည်စိတ်ချရရေတွက်အသုံးပြုကြသည်။ သူတို့ကအပူချိန်အစွန်းရောက် (+ 85C မှ -40), ထိတ်လန့်, တုန်ခါမှုနှင့်စိုထိုင်းဆများအပါအဝင်ကြမ်းတမ်းဆုံးပတ်ဝန်းကျင်မျိုးမှာအတွက်ရှင်သန်။
အားလုံး VersaLogic ကွန်ပျူတာများ applications များကိုဖန်တီးရန်စံ Windows သို့မဟုတ် Linux ကိုလည်ပတ်မှုစနစ်များနှင့်သင့်အကျွမ်းတဝင် Development Tools တွေကိုအသုံးပြု x86 သဟဇာတဖြစ်ကြသည်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ, ကာကွယ်ရေး, အာကာသနှင့်စက်မှုအလိုအလျောက်အတွက်အရေးပါစီမံကိန်းများအတွက်အသုံးပြု VersaLogic ရောင်းသည်တိုင်းဘုတ်အဖွဲ့နောက်ကွယ်မှရပ်များနှင့်ဆုရဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုနှင့်အတူကတက်ထောက်ခံ။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကများအတွက်အောက်ကကုမ္ပဏီအင်ဖို tab ကိုကြည့်ရှုပါ။
ထုတ်လုပ်သူ: VersaLogic Corporation
ဖေါ်ပြချက်: CBL 20" 1CH LVDS 20PIN TO 1.25MM
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 2204 pcs
ဖေါ်ပြချက်: 802. 11N WIFI ANTENNA
ဖေါ်ပြချက်: BENGAL 2-CORE CPU 1.46GHZ ET
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 79 pcs
ဖေါ်ပြချက်: MODULE GPS PCIE RECEIVER
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 373 pcs
ဖေါ်ပြချက်: DRAM4GB PC4-2133 SODIMM DDR4,
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 1719 pcs
ဖေါ်ပြချက်: SBC BAYCAT ATOM DUAL 1.46GHZ
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 107 pcs
ဖေါ်ပြချက်: SBC ATOM E680T 1.6 GHZ2GB
ဖေါ်ပြချက်: RAVEN CABLE KIT
ဖေါ်ပြချက်: SBC BAYCAT ATOM QUAD 1.9GHZ
ဖေါ်ပြချက်: EMBEDDED PROCESSING UNIT
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 50 pcs
ဖေါ်ပြချက်: CABLE 20" 12V LED
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 2879 pcs
ဖေါ်ပြချက်: PCI-104 DUAL MINIPCIE ADAPTER
ဖေါ်ပြချက်: CABLE USB 3.0 TYPE-C PLUG TO TYP
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 3426 pcs
ဖေါ်ပြချက်: CABLE KIT CONDOR - EPU-4460
ဖေါ်ပြချက်: LIGER 2-CORE CPU, KABY LAKE, 4GB
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 38 pcs
ဖေါ်ပြချက်: CABLE KIT FOR EPU-2610 NON-LATCH
ဖေါ်ပြချက်: SBC ARM QUAD-CORE I.MX6QUAD CPU
ဖေါ်ပြချက်: BENGAL BOARD DUAL CORE 1.46GHZ
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 85 pcs
ဖေါ်ပြချက်: ET, CANBUS
ဖေါ်ပြချက်: SBC COPPERHEAD I3 2CORE 1.6GHZ
ဖေါ်ပြချက်: SBC ATOM Z530PT 1.33 GHZ MAX 2GB
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 236 pcs
ဖေါ်ပြချက်: 2.5" IDE DRIVE CABLE
ဖေါ်ပြချက်: SBC COPPERHEAD4CORE I7 2.3GHZ
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 30 pcs
ဖေါ်ပြချက်: SINGLE BOARD COMPUTER
ဖေါ်ပြချက်: 8GB PC3-12800 SODIMM DDR3L
ဖေါ်ပြချက်: BLACKBIRD CABLE KIT
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 290 pcs
ဖေါ်ပြချက်: ET, 8 ANALOG INPUT CHANNELS
ဖေါ်ပြချက်: LIGER 2-CORE CPU, KABY LAKE, ET,
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 34 pcs
ဖေါ်ပြချက်: 4GB DDR3 CLASS2STD TEMP
ဖေါ်ပြချက်: I/O ASSY & PADDLEBOARD/TOMCAT
ဖေါ်ပြချက်: HIGH PERFORMANCE INTEL CORE
ဖေါ်ပြချက်: EXPANSION MOD SSD 8GB EUSB IND
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 1061 pcs
ဖေါ်ပြချက်: 32 GB MSATA DRIVE MINIPCIE IT
ဖေါ်ပြချက်: 15-PIN I/O CABLE ASSY, CBL
ဖေါ်ပြချက်: USB TO STEREO AUDIO ADAPTER
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 2082 pcs
ဖေါ်ပြချက်: 12-PIN2MM LATCH/15-PIN VGA
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 4031 pcs
ဖေါ်ပြချက်: ATX-EBX/EPIC POWER SUPPLY ADAPT.
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 3595 pcs
ဖေါ်ပြချက်: DRAM 8 GB PC4-2133 SODIMM DDR4,
ဖေါ်ပြချက်: DEVELOPMENT CABLE KIT FOR TETRA.
ဖေါ်ပြချက်:4SCREWS, NUTS&BRASS STAND-OFFS
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 41 pcs
ဖေါ်ပြချက်: 20 18-BIT LVDS JAE CABLE,
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 1651 pcs
ဖေါ်ပြချက်: CABLE KIT FOR EPU-3310
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 438 pcs
ဖေါ်ပြချက်: 512MB 200PIN SODIMM PC2700 DRAM
ဖေါ်ပြချက်: SBC ATOM D425 1.8 GHZ MAX 4GB